पत्रु खानाले चाँडै पुर्‍याउला मृत्युलोक ! के खाने–के नखाने ? डा.अरुणा उप्रेतीको सुझावहरु (भिडियो) - OneZero News
पत्रु खानाले चाँडै पुर्‍याउला मृत्युलोक ! के खाने–के नखाने ? डा.अरुणा उप्रेतीको सुझावहरु (भिडियो)
‘खाना खानुभयो ?’ आम नेपालीले सधैँ सोध्ने साझा प्रश्न हो यो । हामी जसरी सजिलै खानाको बारेमा सोध्छौँ तर यसबारे चिन्तित चाहीँ छैनौँ । कस्ता खाना खाने ?, कस्ता खानाले स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ ? भन्नेबारे जानकारी भए पनि सचेतना नभएको बताउँन् चिकित्सकहरु । आम मानिसमा खानाको विषयमा सचेतना नहुँदा नै ठूला स्यास्थ्य समस्या निम्तिने गरेको उनीहरुको तर्क छ ।
कुरमुरे, चाउचा लगायत नियमित रुपमा फास्टफूड खानाले दिर्घकालिन रुपमा स्वास्थ्य समस्या ल्याउने चेतावनी चिकित्सकहरुले दिँदैआएका छन् । यस्तै पाउरोटी, हर्लिक्स, डोनट, अत्याधिक चिनी, मसला जस्ता खन्कीले पनि मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । बरिष्ठ चिकित्सक डा. अरुणा उप्रेतीले केही महिनाअघि ‘खानु खानुभयो ?’ नामको पुस्तक प्रकाशन गरिन् । २ वर्ष लगाएर लेखिएको यस पुस्तकमा पनि खाना बारे धेरै कुरा समेटिएका छन् ।
यतिसम्म कि, गृहिणीहरुले आफ्ना बालबालिकालाई दैनिक विष खुवाएको भन्दै त्यस्तो रोक्न उनको सुझाव छ । बालबालिकाले जतिसुकै पिरलो गरे पनि फास्टपूड र मन्द विष भएका खान्की खुवाउनै नहुने ड. उप्रेतीको भनाइ छ । ‘बच्चा रोयो भन्दैमा विष खान दिनुहुन्छ तपाईँ ?’, डा. उप्रेतीले भनिन्, ‘हड्डी बढाउने भन्दै हर्लिक्स खुवाउनु पनि हुँदैन । बजारमा आएका अधिकांश खाने कुरा हानीकारक छन् ।’